सबै भन्दा पहिले तपाईलाई "बेस्ट टाइम्स" को बारेमा जान्नुपर्दछ Martech Zone
सबै भन्दा पहिले तपाईंले "बेस्ट टाइम्स" को बारेमा जान्नु पर्ने हुन्छ।
आइतबार, जुन 28, 2015 आइतबार, जुन 28, 2015 Douglas Karr
यदि मैले अर्को कहिले पनि साझेदारी गरेन उत्तम समय इन्फोग्राफिक, म खुशी छु कि यो अन्तिम हो। र म साँच्चिकै आशा गर्दछु कि तपाईंले पनि यो साझेदारी गर्नुभयो। मँ हरेक चोटि देख्दा विलाप गर्दछु सबै भन्दा राम्रो समय इन्फोग्राफिक। ट्वीट गर्न उत्तम समय। फेसबुकमा अपडेट गर्नका लागि उत्तम समय। ईमेल पठाउनको लागि उत्तम समय। लिंक्डइन अपडेट गर्न उत्तम समय। ब्लग गर्न उत्तम समय। अर्ग ... यसले मलाई एकदम पागल बनाउँदछ।
जब कोहीले यी इन्फोग्राफिकहरू मध्ये एक साझा गर्दछ, म उनीहरूले कति अविश्वसनीय रूपमा लोकप्रिय देख्छु र यो इमान्दारीपूर्वक निराश हुन्छ। तर त्यसो भएमा मैले व्यवसायहरू वा व्यक्तिको समयरेखामा हेरी जुन यो साझा गर्थे र तिनीहरूले मुश्किलले केहि पनि प्रकाशित गरे। सबैले के गर्दै छन् भन्नेमा ध्यान नदिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस् तपाईंको दर्शक र समुदायले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ, साझेदारी गर्दछ, सages्लग्न र रूपान्तरण गर्दछ। तपाईंको निरीक्षण गर्नुहोस् विश्लेषण - र समय क्षेत्रहरू ध्यानपूर्वक ध्यान दिनुहोस् जब तपाईं निर्णय लिनुहुन्छ जब उपयुक्त समय हुन्छ।
मलाई लाग्छ कहिले प्रकाशित गर्ने उत्तम समय हो? तुरुन्तै तपाईले लेख्न समाप्त गर्नुभयो। मँ सामाजिक मिडिया अपडेट गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो समय हो? जब तपाईंसँग समय छ र साझेदारी गर्न मूल्यको केहि छ। हाम्रो निम्नलिखित बढ्दो छ र प्रकाशनको हाम्रो तालिकाको बाबजुद पनि हाम्रो प्रकाशनमा दुई अंकको वृद्धि छ।
गम्भीरतापूर्वक ... यो एक दौड हो, एक गति ल्याप होईन। ग्यासमा जानुहोस् र कार जानुहुँदा ठीक-ट्यून गर्नुहोस्। कार रेस जित्ने कार प्याकको बीचमा छैन, यो बाहिर छ।
टैग: उत्तम समयउत्तम समय इन्फोग्राफिकसबै भन्दा राम्रो समयपोष्ट गर्न उत्तम समयसबै भन्दा राम्रो समय प्रकाशित गर्न को लागीईमेल पठाउनको लागि उत्तम समयट्वीट गर्न उत्तम समयफेसबुक अपडेट गर्नका लागि उत्तम समयलिंक गरिएको अपडेट गर्न उत्तम समय
कसरी मार्केट गर्ने र तपाईंको अर्को घटना अनलाइन प्रचार गर्नुहोस्